Ukuqondisa kumshini wokuphrinta weBhange leMandla China Manufacturer
Incazelo:Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank,Ukubuyekeza okuphambili kwe-Power Bank,Ukubukeza kokubuyekezwa kwephrinta ye-Power Bank
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Power Bank > Ukuqondisa kumshini wokuphrinta weBhange leMandla
Singumholi embonini yemishini yokunyathelisa ye-UV.Umshini wokunyathelisa we-3D Stereoscopic unesistimu elawulwa yikhompyutheni eminingi engaxhunyaniswa ngqo kukhompyutha. Uma nje izithombe zemibukiso (izithombe) zingena kukhompuyutha, izithombe zingahle zidwetshwe ngqo kunoma yiziphi izithelo. Iqukethe izici zokusheshisa okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo kanye nokwenziwe ngokwezifiso.Ngaphandle kwalokho, kungabeka ngokushesha ngokushesha uma usaphafaza.Amazinga okuphatha anemibala, umbala, ukuguqulwa kombala kanye neminye imiphumela ibonakala ngokugcwele ngezithombe zethu zodonga.
Ukuqondisa kumashini wephrinta ye-Power Bank Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yeselula, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, i-KT board , itshe, i-silica gel, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo ze- Direct Direct kuya ku-Power Bank Printer Malaysia RF-A3UV:
Ohlakaniphile: 1. Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Ukuphrinta ukuphrinta ndawonye (umhlophe + umbala / umbala + umhlophe);
3. Ukuqondisa ku-Power Bank ye-Power Bank iphrinta ye- Power Bank ine-sensor Detecting Sensor, uma inkinobho iphelile kuyoba yingozi;
Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank Ukubuyekeza okuphambili kwe-Power Bank Ukubukeza kokubuyekezwa kwephrinta ye-Power Bank Ukuqondisa ku-Printer Bank Power A4 Ukuqondisa ku-Wood Printer Ukuqondisa ku-Shoes Printer Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Amazon Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Ebay